ဆမ်ဆောင်း သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့၌ အခြေစိုက်သော နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာ တည်ထောင်ထားသည့် တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် လီဗျောင်ချူးမှ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်ပြီးနောက် ဆယ်စုနှစ် သုံးခုကျော်ခန့်တွင် အစားအသောက်၊ အထည်အလိပ်၊ အာမခံ စသည့်လုပ်ငန်းများကိုပါ လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်း၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ လီဗျောင်ချူးကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင် ဆမ်ဆောင်းအုပ်စု၊ ရှင်စီဂေ့အုပ်စု၊ စီ ...
Light Dependent Resistor or Photoresistor ၏ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် ယင်းအပေါ်သို့ ကျရောက်သည့် အလင်းပြင်းအားနှင့် လိုက်၍ ပြောင်းသည်။ထို့ကြောင့် အလင်းအာရုံခံသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်လမ်း နှင့် အမှောင်အာရုံခံသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်လမ်း များကိုခလုတ်ကဲ့သို့ အသုံးချကြသည်။ LDR ကို ခုခံမှုတန်ဖိုးမြင့်သော cadmium sulphideတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။အမှောင်ထဲတွင်LDR ၏တန်ဖိုးသည် မြင့်မား၍ မီဂါအုမ်းခန့် ရှိနိုင်သည်။အလင်းထဲတွင်မူ အုမ်းတန်ဖိုးသည် ရာဂဏန်းခန့်သာရှိနိုင်သည်။Cadmium Sulphide မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အလင်းကျရောက်ချိန်တွင် အက်တမ်မှ နဂိုရှိသော အီလက်ထရွန်များကို ထုတ်ပေးလိုက်ရသဖြင့် LDR ၏ခုခံမှုသည် က ...
စစ်မြေပြင်တွင်စစ်မြေပြင် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ BA-I ဆိုဗီယက်သံချပ်ကာကားတစ်စီး BAI ဖိုင်အမျိုးအစား ၊ အီလက်ထရောနစ်ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုလက်ကျန်ငွေကိုအစီရင်ခံခြင်းအတွက်ဖိုင်ပုံစံ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ Arte Ingeniaria တစ်ခုပညာသင်နှစ်ဘွဲ့အတွက် Baccalaureus ခေါ်
မာရကက်ရှ်မြို့ သည် မော်ရိုကိုနိုင်ငံရှိ စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ အလယ်-အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ မာရကက်ရှ်-ဆာဖီ၏ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သည်။ အက်တလပ်တောင်ကုန်းများ၏ အနောက်ဖက် တောင်ခြေတွင် တည်ရှိသည်။ မာရကက်ရှ်မြို့သည်. တန်ဂျီယာမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၅၈၀ km အကွာ၊ မော်ရိုကိုနိုင်ငံမြို့တော် ရာဘတ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၃၂၇ km အကွာ၊ ကာဆာဘလန်ကာမြို့၏ တောင်ဘက် ၂၃၉ km အကွာ နှင့် အဂါဒီယာမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၂၄၆ km အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုဒေသတွင် ကျောက်ခေတ်သစ် ကာလကတည်းက ဘာဘာလူမျိုးများ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်အား ၁၀၆၂ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်မိုရာဗစ် ဘုရင် ယူစွပ် အီဘင် တက်ရှ်ဖင် ၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ တော ...
အစ္စရေး-ဖိလစ်ပိုင်ဆက်ဆံရေး သည် အစ္စရေးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ညွှန်းသည်။ ၁၉၅၈ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင် ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး အပြည့်ရှိသည်။ မနီလာရှိ အစ္စရေးသံရုံးနှင့် တဲလ်အဗစ်ရှိ ဖိလစ်ပိုင်သံရုံး နှစ်ခုလုံးကို ၁၉၆၂ ခုတွင် ဖွင့်သည်။
1. အီလက်ထရွန်းနစ်၏ ဘာသာရပ်ခွဲများ
2. အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများ
3. အီလက်ထရွန်းနစ် စမ်းသပ်ကိရိယာများ
အမ်မီတာ Ammeter - ဥပမာ ဂါဗနိုမီတာ လျှပ်စီးအားကို တိုင်းတာသည်။
အုမ်းမီတာ Ohmmeter - ဥပမာ ဝိစတုန်း ဘရစ်ချ် ခုခံအားကို တိုင်းတာသည်။
ဗို့မီတာ Voltmeter - ဗို့အားကိုတိုင်းတာသည်။
မာလ်တီမီတာ Multimeter - အထက်ပါအရာအားလုံးကို တိုင်းတာသည်။
အော်ဆီလိုစကုပ် Oscilloscope - ခုခံအားမှအပ အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေသော အထက်ပါအရာအားလုံးကို တိုင်းတာသည်။
လောဂျစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ Logic Analyzer - ဒီဂျစ်တယ် ပတ်လမ်းများကို စမ်းသပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ဖြာထွက်ရောင်ခြည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ Spectrum AnalyzerSA - အချက်ပြလှိုင်းများမှ ဖြာထွက်ရောင်ခြည်၏ စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ဗက်တာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ Vector Analyzer VA - ဖြာထွက်ရောင်ခြည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ နှင့်ပုံစံတူသည်။ သို့သော် ဗက်တာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာသည် ဒီဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းများကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း Demodulation လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အီလက်ထရိုမီတာ Electrometer - ဓာတ်အားကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ကြိမ်နှုန်းရေတွက်စက် Frequency Counter- ကြိမ်နှုန်းကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။
Time-Domain Reflectometer- ရှည်လျားသော ဝိုင်ယာကြိုးများ ကောင်းမွန်မှု ရှိမရှိကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။
4. အင်နာလော့ ပတ်လမ်းများ
အင်ပီးဒင့် တွဲဖက်ကိရိယာ Impedance Matcher
Phase-locked ပတ်လမ်း Phase-locked Loops
အီလက်ထရွန်းနစ် မစ်ဆာ Electronic Mixers
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်း Power Conversion
အီလက်ထရွန်းနစ် ပါဝါဆပ်ပလိုင်း Electronic Power Supply
အီလက်ထရွန်းနစ် အင်ပလီဖိုင်ယာ Electronic Amplifiers
အော်ပရေရှင်နယ် အင်ပလီဖိုင်ယာ Operational Amplifiers
အင်နာလော့ မာတီပလိုင်ယာ Analog Multipliers
အီလက်ထရွန်းနစ် ဖစ်တာ Electronic Filters
အင်နာလော့ ကွန်ပြူတာ Analog Computer
အီလက်ထရွန်းနစ် အော်ဆီလေတာ Electronic Oscillator
5. အီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ
အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများကို စက်ရုံများတွင် အသုံး ပြုခြင်းဖြင့် လူ့မျက်စိဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်လည်းကောင်း မမြင်နိုင် မစမ်းသပ်နို်င်သော စက်၏ချို့ယွင်းချက်များကို ချက်ချင်း သိနိုင်ပေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်သော အနည်းငယ် ပြောင်းလဲချက်ကလေးကိုပင် မှတ်သားယူနိုင်ပေ သည်။ မကြာသေးမီက တီထွင်လိုက်သော ဖိုတိုအီလက်ထရစ် ဆဲအလင်းလျှပ်စစ်အိမ်ခေါ် အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာသည် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အထူးအသုံးဝင်၍ အရေးပါအရာ ရောက်သော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဖိုတိုအီလက် ထရစ်ဆဲသည် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အရွယ်အစားတို့ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ရေတွက်ရန်အတွက် အသုံးဝင်၏။ ဖိုတို အီလ်ထရစ်ဆဲကို ရေတွက်ရန် အတွက် အသုံးပြုပုံမှာ ထိုကိရိယာကို ရေတွက်သော မီတာနှင့် ဆက်သွယ် ပြီးနောက် ဖိုတိုအီလက်ထရစ်ဆဲ အပေါ်သို့ အလင်းတန်းကျစေသည်။ ထိုသို့ အလင်းတန်းကျနေသည့် အခါတွင် လျှပ်စစ်ဆာကစ်သည် ပွင့်၍နေသည်။ ထိုအလင်း တန်းကို ထောင့်မတ်ကျဖြတ်၍သွားသော ခါးပတ် ပေါ်တွင် သယ်ဆောင်သော ပစ္စည်းများကို ထား၏။ အလင်းတန်းသည် ခါးပတ်ပေါ်တွင် ပါလာသမျှပစ္စည်းတို့၏ အဖြတ်ကို အကြိမ် ကြိမ်ခံရသည်။ ထိုသို့ အဖြတ်ခံရတိုင်း ဖိုတိုအီလက်ထရစ်ဆဲ အပေါ်သို့ တစ်ဆက်တည်း အလင်းရောင်မကျနိုင်တော့ဘဲ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသာ ကျနိုင်ပေသည်။ ဖိုတို အီလက် ထရစ်ဆဲရှိ လျှပ်စစ်ဆာကစ်သည် အလင်းတန်း အဖြတ်ခံရတိုင်း ပိတ်၍သွားပြီးလျှင် ရေတွက်သည့် မီတာသည်လည်း ကလစ် ဟူသော အသံမြည်၍ အရေအတွက်ကို မှတ်သားလိုက်သည်။ ထိုကြောင့် ပစ္စည်း များသည် အလင်းတန်းကို ဖြတ်သွားတိုင်း ဆဲအပေါ်သို့ အရိပ်ကျကာ ဆာကစ်သည် ပိတ်သွား၍ ပစ္စည်း ၏အရေအတွက်ကို အလိုအလျောက် ရေတွက်ပြီးသား ရရှိ လေသည်။